प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै केपी ओली आज शीतलनिवास जाने - BirtaJyoti
adminFebruary 14, 2018 12:00 am 0
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनावी नतिजालाई निर्वाचन आयोगले औपचारिकता दिन बाँकी छँदै वाम गठबन्धनका नेताहरुले शीतलनिवास जाने गृहकार्य थालेका छन् ।
आयोगले बुधबार राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाउने सम्भावना देखेपछि एमाले र माओवादीका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि तम्तयार भएका हुन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरु शीतलनिवासबाट बाहिरिनासाथ वाम नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्ने छन् ।
बुधबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक राखिएको छ ।
तर, यसवीचमै आयोगले नतिजा बुझाएमा नेताहरु बैठककै वीचमा शीतलनिवास जानेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्नेबारे मंगलबार ओली र प्रचण्डवीचको ‘वान टु वान’ वार्तामा छलफल भएको एमालेका एक नेताले बताए ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको नाम सच्याउन दलहरुलाई आजसम्मको समय दिएका छन् । नाम सच्याउन भनिएका तीन दलमध्ये माओवादी र राजपाले मंगलबार नै बुझाइसकेका छन् ।
अब कांग्रेसले मात्रै नामावली बुझाउन बाँकी छ ।
दलहरुले अन्तिम नामावली बुझाएको लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा हुनेछ ।
अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको ७ दिनभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, आयोगले बुधबार शीतलनिवास जाने गृहकार्य गरेको छ । एक आयुक्तले भने( ‘दलहरुले बुझाएको नाममा गडबडी रहेनछ भने आजै राष्ट्रपतिलाई अन्तिम परिणाम बुझाउँछौं ।’
आयोगले बुधबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएको खण्डमा आजै एमाले र माओवादीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्ने एक नेताले बताए ।
एमालेका एक नेताले भने( ‘निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएमा प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्ने दुई दलवीच सहमति भएको छ ।’
संविधानतः कुनै एक दलको बहुमत भए उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । नभए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउनेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीको बहुमत छ । साथै दुबै दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत छन् ।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेलगत्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बहिर्गमनले औपचारिकता पाउने छ ।
निर्वाचन सकिएपछि पनि सरकार नछाडेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवामाथि आलोचना हुँदै आएको छ । मंसिर २१ गते नै प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिए पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नसकिई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने अडानमा देउवा रहँदै आएका छन् । र, यसवीचमा राष्ट्रियसभाको पनि निर्वाचन सकिएको छ ।
प्रदेशसभा १ एमालेका प्रदीप भण्डारी सभामुखको उम्मेदवार
विराटनगर । नेकपा एमालेले प्रदेश १ को प्रदेशसभा सभामुखमा प्रदीप भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको छ । सुनसरी १ क बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भण्डारीलाई एमालेले ... Read More
कहाँ बस्छन् शेरधन ? विराटनगर कि इटहरी ?
विराटनगर । प्रदेश १ सगरमाथा समेत समेटिएर बनेको छ । अनि यहाँका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका चुनौतीहरुको पहाड पनि सगरमाथा भन्दा होचो छैन । मुख्यमन्त्रीका चुनौतीहरु ... Read More
admin- November 23, 2017
काठमाडौं । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामा चितवन– ३ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाललाई जिताउन खटिएका छिन् । प्रतिनिभिसभा ... Read More
NEWER POSTसुकुम्बासी र बाढीपीडितलाई सहारा
OLDER POSTतपाईंमा पनि छन कि यी ६ घातक आदत
वर्षाले भद्रपुर विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रभावित, बेलुकासम्मै उडान सेवा पुनः सुचारु
लघु चलचित्र म को निर्माण